ဖုန်းနံပါတ်: +86 13967814013
ရုတ်သိမ်း & Connection ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း
Ningbo Saixin သံလိုက်နည်းပညာ Co. , Ltd ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ Ningbo တရုတ်နိုင်ငံမြို့တော်ထုတ်လုပ်ခေါင်းစဉ်နဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမြို့တွင်တည်ရှိသည် 2008 ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် Ningbo ဖြေရှင်းချက်သံလိုက် Co. , Ltd မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကသာ2ကီလိုမီတာကွာ Ningbo Lishe အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် precast ကွန်ကရစ်သံလိုက်ကိုပြုပြင်တာတွေထုတ်ကုန်၏ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရင့်ကျက် R & D အသင်းနှင့်အဆင့်မြင့် Full-စကေးထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း precast ကွန်ကရစ်စက်ရုံများများအတွက်လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေးလျှော့ချရန် precast ကွန်ကရစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သံလိုက်ကိုပြုပြင်တာတွေအတွက်အပြည့်အဝဖြေရှင်းချက်ပေးစဉ်များတွင်ပါဝင်နေကြသည်။
shutter သံလိုက် 900 ကီလိုဂရမ် Precast ကွန်ကရစ် Magn ...
ကုန်ပစ္စည်း DescriptionVertical စုတ်ယူခြင်း: ≥800kgsSize: သားညှပ်ပေါင်မု panel ကနေ, အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကို panel ကမှိုကိုပြုပြင်တာတွေဘို့က x 9.5 x ကို419 cmN.W .: 2.6kgsBe သင့်လျော် ...
ကုန်ပစ္စည်း DescriptionSX-1801 စနစ်တကျဝတ်၏ထုတ်လုပ်မှု, သားညှပ်ပေါင်မုမြို့ရိုး, အစိုင်အခဲမြို့ရိုး, ပြားများအတွက် shutter စနစ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ SXB-1801 ရရှိနိုင်ပါသည် ...
INSERT Sockets သံလိုက် SX-CZ50 Precast Concre ...
ကုန်ပစ္စည်း DescriptionSX-CZ50 precast ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်မှု bushing ပေါင်းလိုက်သော embedded ကိုပြုပြင်တာတွေများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အဆိုပါ embed fix မှသံလိုက်ထည့်သွင်း SAIXIN အသုံးပြုခြင်း ...
ဒီထုတ်ကုန်အချင်း, အ fixation ၏အောက်ဆုံးစုတ်ယူခြင်း, 180 ကီလိုဂရမ် Nd သည်သံအားကောင်းတဲ့သံလိုက်အင်အားနဲ့သတ္တုပစ္စည်းများ၏လုပ် 78 မီလီမီတာ, ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SAIXIN အတူတကွသံလိုက်ပိတ်ထားမြင့်မားခွန်အားကောင်းသောကျောမှုနှင့်အတူအသုံးပြုသောအထူးအစွန်းသွားဒီဇိုင်း, သံလိုက် Chuck နှင့်အတူ stro ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ် ...
86 # လျှပ်စစ်-Box ကို Insert သံလိုက် Precast Concre ...
ကုန်ပစ္စည်း DescriptionSXY-7172 လျှပ်စစ် box ကိုသံလိုက်ကျွန်ုပ်တို့သည် precast ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်သည့်အခါလျှပ်စစ်သေတ္တာများအတွက် panel ကိုအတွက်အပေါက်အောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ SAIXIN ...
ရော်ဘာတြိဂံသံလိုက် Chamfer မြှောင် 8X8mm / ...
ရော်ဘာသံလိုက် Chamfer သင်ဟာအလွယ်တကူ shutter မျှ chamfer ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်လျှင် chamfer ဖွဲ့စည်းရန်သူတို့ကိုသုံးနိုငျဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။ သံမဏိသံလိုက်ချွတ်, rubb နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ...
SAIXIN လျင်မြန်ဓာတ်လှေကား precast ကွန်ကရစ်မှ / တန်းမြင့်သံမဏိနေဖြင့်သံမဏိရုတ်သိမ်းကျောက်ဆူးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါရုတ်သိမ်းကျောက်ဆူးရိုးရာရုတ်သိမ်းကျောက်ဆူး syste ဖြစ်ပါတယ် ...
SAIXIN, အဆိုပါရုတ်သိမ်း clutch အထူးပါးလွှာတဲ့ကွန်ကရစ် panel ကိုရုတ်သိမ်းစနစ်ကိုသုံးနိုင်သည်တန်းမြင့်သံမဏိနှင့်အတူ clutch ရုတ်သိမ်းရေးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ di လိုက်ဖက်ရုတ်သိမ်း clutch ...
စက်ပက်ဖြန်းကွန်ကရစ် sh အတွက်အများဆုံးဧရိယာ၏လွှမ်းခြုံသေချာနိမ့်ဆုံးပြန်တက်နဲ့အတူစဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းမှုကိုဖွင့်နည်းပညာကိုပက်ဖြန်းအတွက်အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ် ...
Ningbo Saixin သံလိုက်နည်းပညာ Co. , Ltd မှ။
လေဆာစက်ဖြတ်တောက်ခြင်း - TruLaser 3060, TruLaser 3040, (မက်စ်ခ်ကတ် Size:2မီလီယံ x ကို4မီလီယံ, မက်စ်စာရွက်အထူ: ပျော့သံမဏိ 20mm သံမဏိ 12mm, လူမီနီယံ 8 မီလီမီတာ) Bende စက် - Accurpress 560060, (မက်စ် lenght6လ, max ကိုစာရွက်အထူ 12mm) Levelig Mahchine - စာရွက်အထူ 1-23mm, max ကိုအကျယ် 1850mm စသည်တို့ ...
အများကြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်ဆောက်လုပ်ရေး၏စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ PC ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သံလိုက်လ်တာကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်မှုလျှောက်ထားသံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အကြံအဖန်တွေချည်းအဆောက်အဦစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့၏အတွေ့အကြုံကို၌အကြှနျုပျတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးပြု. ကျနော်တို့ပြီးသားအစေခံရန်စတင်ပါပြီ အပင်ထုတ်လုပ်မြောက်မြားစွာလူသိများတဲ့ကွန်ကရစ်ဒြပ်စင်။
အပူ, Connector, Mag Switch Magnets, Permanent Magnetic Steel, Formwork သံလိုက် ,
Adress: အမှတ်2Xingguang စက်မှုပန်းခြံ, Haishu ခရိုင်, Ningbo, Zhejiang, တရုတ်